GGO: Sabboonummaan Oromoo maali? Eenyutu Sabboonaa ykn Sabboontuu dha? -
bilisummaa April 21, 2013	1 Comment
Yeroo baay’ee yoo dubbatamu ykn barreeffamu, sabboonummaan Oromoo guddachaa akka dhufe agarsiisa. Dhugaa dhas; galanni qabsoo bilisummaa Oromootiif akkasumas gootota keenya kan qabsoo kana keessatti wareegamaniif haa ta’u, Sabboonummaan Oromoo dhugumatti guddachaa dhufee jira. Keessumaayuu erga bara 1991 jijjiiramni hamma kan hin jedhamne argame booda, guddinni Sabboonummaa Oromoo sadarkaa ol aanaarra gahaa akka jiru hubatama. Haa ta’u malee, dhugumatti hiikni sabboonummaa hunda keenyaafuu galee jiraa? Namni tokko ani sabboonaa dha ykn sabboontuu dha yookaanis ammoo abalu sabboonaa/sabboontuu dha yoo jedhu, sabboonummaa maaliin madaaleti akkana jedhaa?Gara Sabboonummaa Oromootti otuu hin cehin dura, jecha sabboonummaa jedhu hiika isaa ilaaluun barbaachisaa dha. Jechi “sabboonummaa” jedhu Afaan Ingliziitiin “nationalism” jechuu yoo ta’u, hiikni isaa akka armaan gadii ti.
Hiikni Sabboonummaa Oromoos (Oromo nationalism) kan asitti kennaman kanaa ala hin ta’u. Ani akkan ofii kiyyaa hubadhutti ykn akka naaf galutti, Sabboonummaa Oromoo jechuun gabaabumatti qabxiilee armaan olitti kennaman kanatti dabalachuudhaan, fedhii saba Oromoo eeguu; seenaa, aadaa fi Afaan Oromoo jaalachuu fi ittiin boonuu; eenyummaa ofii (Oromummaa) jaalachuu fi kabajuu; isa kanaafis dursa (priority) kennuu fi kkf dha. Obboo IBSAA GUUTAMAA barreeffama isaanii tokko keessatti, Sabboonummaa akkana jedhanii ibsanii turan: “Sabboonummaan onnnee Oromummaan guute malee barumsa yk leenjisa addaa hin gaafatu.”Dhugaa dha, Sabboonummaan Oromoo bilchina, guddina fi dagaagina Oromummaarraa madda malee, kan barumsarraa ykn leenjii keessaa argamuu miti. Otuu kan barumsarraa ykn leenjiirraa argamu ta’ee, diinni fi alagaanuu silaa Sabboonummaa Oromoo barachuu ni danda’an. Haa ta’u malee, onnee Oromummaan guutame qabaachuu hin danda’an; kun eenyummaarraa waan madduufi. Eenyummaa ammoo abbaan fedheeyyuu bituus gurguruus hin danda’u.
Tags Abdii Boroo GGO Guyyaa Gootootaa
Previous US Department of State: Ethiopia – Country Reports on Human Rights Practices for 2012
Next Power Politics vs. Leadership: Reflection on the Birth of ODF
Obbo ibsaa guutamaa ni irraanfatee sa wol gahii biyya germany ABO mallas wolitti araarsuu deemee hidhamnee oromoo hidhaa baasuun hafee of iyyuu hidhaa bahuu dadhabee Dr kuwe Kumsatti bilbilee boohee jennaan Leencoo Lataa dhaqee baasuun kunoo harra yakkaan himatamaa jira mitii hiccitii wolaloo keessatti waan kasanchis xuyxe sun nin beekaa guyyaa dhibiin baasaa hammaaf si gahaa utuu akka wolaloo fi barreeffamaatii keetuu oromoo ni bilisoomsa gara fuurduraatti oromoon lafa irraa daguugamaa dhufee akka lafee luusii ekeraa oromoo irratti qormaata adeemsifta moo?yoo hamma bifuma fedheenuu biyyatti deebitee sabaa woliin hin qabsoofne?